तिथि मेरो पत्रु »6प्रमुख प्रश्न पनि डेटिङ पूल मा डूबा लिनुअघि आफैलाई सोध्नुहोस् गर्न
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 27 2020 |3मिनेट पढ्न
एक नियमित सपिङ्ग यात्रा लागि खाद्यान्न पसलमा गर्न जाने कल्पना गर्नुहोस्. तपाईंलाई चाहिने कुराहरू सूची बाहिर बनाउन नगर्दा, एक बजेट, वा भोजन विचार.
छनोटको एरे मन boggling छन्. पहिलो हेर्न जहाँ तपाईं थाहा छैन. तपाईं आफ्नो पागलपन कुनै प्रणाली ... .no विधि.
बाकी समय बर्बाद छौँ भनेर ढुक्क, केहि ज्यादा आवश्यकता "माथि शेयर" आइटम लेने भूल, overspend, र महिना हुनुअघि दोस्रो यात्रा अन्त.
हामी "बजार" मा छौं जब अराजकता र भ्रम यस्तै अर्थमा जोडी लागि प्रबल.
हामीलाई थुप्रै हामी के खोज्दै हुनुहुन्छ कुनै वास्तविक अर्थमा छ, जहाँ हेर्न, वा कसरी जानकारी छनोटहरू आइपुग्न.
तर, यो यसरी हुन छैन.
सुकरात एक पटक बुद्धिमानी बताइएझैं: "यस unexamined जीवन बाँच्ने लायक छैन।"
हाम्रो दिशानिर्देश यस संग, यहाँ हो6महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं सबै-महत्त्वपूर्ण पहिलो तारीख मा चलि पहिले आफैलाई सोध्नुपर्छ.
1. मेरो वर्तमान डेटिङ लक्ष्य के हो? म एक भविष्य पति खोज्दैछु? आकस्मिक डेटिङ? कुनै खुला सम्बन्ध? एक चीनी पिताजी? तपाईं हो स्पष्ट, राम्रो तपाईं एक संभावित साथी यो संवाद गर्न सक्षम हुनेछु, र fairer यो तिनीहरूलाई हुनेछ. तपाईं तिनीहरूलाई मुखर छैन तापनि, यो प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया मा समय र उथलपुथल बचाउन मदत गर्न सक्छ. रणनीति विचार!
2. मेरो सम्झौता तोडने के-के हुन्? अर्को शब्दमा, के गुण, बानी, वा जीवनशैली मुद्दाहरू तपाईं सम्झौता गर्न अनिच्छुक छन्. उदाहरणका लागि, केही मानिसहरू हुनेछ बच्चाहरु संग छैन मिति महिलाहरु. आपराधिक रेकर्ड केही महिला छैन मिति मान्छे. अनि अरूलाई लागि, उमेर समग्र समीकरण मा एक कारक हुन सक्छ. सम्झौताका सबै सफल सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छ तापनि, हामी हाम्रो कोर मान वा हामी को हौं सार कहिल्यै सम्झौता गर्नुपर्छ, बस एक प्यारा संग मिलेर गर्न.
3. म मेरो अन्तिम सम्बन्ध कस्तो पाठ सिके? महान् सत्य अभिव्यक्ति त्यहाँ छ, "विगतमा सिक्न असफल गर्नेहरूले यो बारम्बार किस्मत छन्।" सायद मसा मा तपाईं अब "ठग" आफ्नो कुरा हो भनेर स्वीकार्नु. अथवा तपाईं बेहतर आफ्नो आवश्यकता संवाद गर्न आवश्यक छ कि. पाठ प्रत्येक प्रेम लागि फरक "विद्यार्थी।" वास्तविक उद्देश्य पुनरावृत्ति जोगिन कुनै पनि विनाशकारी वा disserving डेटिङ पैटर्न पहिचान गर्न छ. यहाँ विचार प्राप्त?
4. मेरो खोज व्यावहारिक अपेक्षालाई चल्ने? उच्च प्राथमिकता एक लुगा धुने सूची राख्दा मात्र व्यर्थ गराउनु र प्रक्रिया लम्ब्याइरहन हुनेछ. उदाहरणका लागि, केही महिला छ फिट अग्लो छ जो एक जोडी भेट्टाउन कामना, छ आंकडे बनाउने, जो विवाह भएको कहिल्यै छ, बोल्छ3भाषा, र जान्छन् प्रेम. के यो सम्भव छ? पक्का.
सायद? मलाई सकेसम्म मेरो सेलिब्रिटी क्रश विवाह बारे, Keanu रीव्स. एक छनक प्राप्त.
5. यो मेरो खुट्टा गीला प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो समय छ? म एक पलटाव खोज्दैछु एक पूर्व सम्बन्ध प्रतिस्थापन गर्न? म एक सम्बन्धमा एक बराबर साथी हुनुको समर्पित गर्न समय र ऊर्जा छ? म विगतमा घाउ निको छ? यी विचार गर्न महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्. अनि मात्र तपाईं वास्तविक सम्झौता ठेगाना.
6. मेरो खेल योजना के हो? म एक अनलाइन डेटिङ सेवाको लागि साइन अप हुनेछ? मलाई मर्मत मेरो साथी सोध्छन्? मेरो दराज "मिति तयार छ?"म वजन आवश्यकता हो? म दुई पटक दुई एक हप्ता वा एक महिना केटासित हुनेछ? सबै गम्भीर लक्ष्य जस्तै, एक खेल योजना कम्पासको रूपमा सेवा गर्न स्थानमा हुनु आवश्यक, प्रतिबद्ध हामीलाई राख्न, र मार्ग हामीलाई राख्न.
"तिम्रो स्वयं साँचो हुन।" तपाईं अधिक संगत सम्बन्ध सही जोडी भेट्टाउनु र बनाउन को नहुनु वृद्धि गर्न चाहन्छु भने, पहिलो आफैलाई चिन्न.
चकमक र अन्य मोबाइल अनुप्रयोग संग डेटिंग लागि सुझाव